Farmaajo oo Darajada Ciidannimo ka xayuubiyay Saadaq Joon - Awdinle Online
Madaxwaynaha Muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa S/G Saadaq Cumar Maxamed (Saadaq Joon) ka xayuubiyay dhamaan darajadii ciidan si waafaqsan sharciga ciidamada Qalabka sida.
Farmaajo ayaa ku eedeeyay Jenaraalka in uu kasoo horjeestay.
Farmaajo ayaa horay uga qaaday darajada Ciidanimo Cabdala Cabdalla oo ahaa taliye ku xigeenka NISA.
Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan ayaa sheegay in ay joojiyeen Kulankii loo balansanaa ee Maanta ee Golaha Shacabka, kaas oo ajandihiisu ahaa ka doodista mooshin la xiriira doorashooyinka.
Taliye Saadaq oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in sababaha kulanka ay u joojiyeen ay tahay in aysan dhicin wax la boobayo, iyo in mudo kororsi la sameeyo balse waxkasta lagu dhameeyo in la gaaro isfaham siyaasadeed.
Waxa uu si cad u sheegay in xilligan aysan u cuntamin in Golaha Shacbaka oo uu u dhaartay in uu amnigooda ilaliyo in uu dilo ama uu dhibaateeyo, waxaana uu Xildhibaannad uu ugu baaqay inay degaannadii laga soo doortay dib ugu laabtaan si ay doorasho uga soo galaan.
Previous articleMidowga Yurub oo u hanjabay Madaxda Dowladda ( Waa in laga heshiiyaa doorashada)
Next articleMaraykanka oo ciidammadiisa kala baxaya Afghanistan